Germany iri mumaonero eTSMC kutora fekitori yayo yekutanga muEurope | Linux Vakapindwa muropa
Germany iri mukuona kweTSMC kutora fekitori yayo yekutanga muEurope
TSMC kana inozivikanwa zvakare seTaiwan Semiconductor Inogadzira Kambani, ichangobva kuzivisa izvozvo ine Germany mumaonero ayo, nekuti ndipo pauri kuda kuvaka chirimwa kugadzira machipisi ako.
Kambani iyi yakati yakanga isati yakurumidza kutaura kuti ichavaka mafekitori kuGerman uye kuti hurukuro idzi dzichiri kure nekuva chirevo, zvakadaro. chirongwa chekuwedzera kubva kuTaiwan semiconductor mugadziri Iyo inouya panguva iyo EU inotsvaga kudzikisa chip kupinza kunze, asi zvakare kubvisa njodzi yeuspionage, pakati pekushomeka kwekupa.
Pamusoro peEU inotsvaga kusimudzira semiconductor kugadzirwa uye kuzvidzivirira kubva kune zvakavhunduka mune yepasirese cheni cheni. Nekudaro, kubvira kutanga kwegore, European Commission yaita hurukuro nevepasi rose hofori yeiyo chip indasitiri, kusanganisira Intel neTSMC.
Mukupindura danho iri, TSMC yakati kambani iyi yatanga kufunga nezvekuvaka chirimwa kuGerman. Sarudzo inoenderana nezvinodiwa uye zvinodiwa nevatengi. TSMC, nepo mutengo wekumisikidzwa uchizogovaniswa pakati peTSMC, vatengi vayo uye / kana vemo kana vehurumende.
"Tiri muchikamu chekutanga chekufunga kuti toenda kuGerman here," Sachigaro weTSMC weBhodi revatungamiriri VaMark Liu akaudza varidzi vemisangano kumusangano mukuru wekambani. "Ichiri chimbi-chimbi, asi tiri kuchiongorora zvakanyanya uye [sarudzo] inoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu," akawedzera. Iwo makomendi ndicho chiratidzo chazvino chekuti kambani yakakoshesa yepasi rose chip iri kufamba ichibva pamazano ayo emakumi emakore-ekuisa mazhinji ekugadzirwa kwayo kwechip muTaiwan.
Iyo kambani iri kutovaka fekitori $ 12 bhiriyoni chip muArizona uye inoronga kuvaka yako yekutanga chip fekitori muJapan. Nezve chirimwa chemberi cheTSMC muUnited States, Liu akati ichatsigira kudiwa kwevatengi, kunyanya muzvivakwa uye kuchengetedzeka kwenyika.
“Makasitoma ndiwo musimboti wekuwedzera kwedu pasi rose. Tichaita nemazvo, ”akadaro Liu. Iyo fekitori ichave yekutanga TSMC yekutanga nzvimbo munyika mumakore makumi maviri. Kugadzira kunotarisirwa kutanga mukati angangoita makore maviri nehafu, kana kutanga kwa2024.
Aimbova Sachigaro Wekutanga weTSMC Morris Chang, Ichangobva kunyevera kuti kumhanyisa kuunza semiconductors kumba kwaizounza mari zhinji pasina kuona kugutsikana kwezviputi zvinotsvaga hupfumi hukuru. Sechikamu chekumisikidzwa kwayo muJapan, Liu akati kambani iyi iri kukurukura nevatengi vayo vekuJapan nzira dzekudzikisa mashandiro ekushandisa. Sekureva kwake, mutengo wekuvaka nekushandisa chip fekitori muJapan wakakwira zvakanyanya kupfuura kuTaiwan.
“Tiri kutaura takananga nevatengi vedu vekuJapan nezvenzira dzokuderedza musiyano wemutengo. Kana kuita kwekushingaira kwapera, chinangwa chedu ndechekuti titomboputsa mari, ”akadaro Liu.
Sekureva kwevaongorori, mashoma mashoma magadzirirwo akagadzirwa muEU anoda epamberi maitiro ayo TSMC inozivikanwa. Maererano navo, inovaka semiconductor yekugadzira nzvimbo inowirirana N3 kana N2 (3nm kana 2nm) muEurope hazvina musoro (Izvi zvakare ndizvo zvinoda vakuru veEuropean).
Zvisineyi, pane makambani ekuEurope anokwana mumaindasitiri emotokari nematarevhizheni vachishandisa node dzemberi uye dzakakura dzeTSMC.
Kune makambani akazvimiririra akabuda kunze semiconductor musangano uye makambani ekuyedza anopa zvakafanana masevhisi, asi zvakare iri muTaiwan, China kana dzimwe nyika dzeAsia. Naizvozvo, Kana iwo machipisi anogona kuitwa muEurope, ivo vanofanirwa kutumirwa kuAsia kunoedzwa uye kuungana, uye ndokuzodzokera kuEurope, kwadzichashandiswa.
Parizvino, TSMC haisi kutaura nezvekuvaka nzvimbo yekupakira muEurope, asi zvinoita sekunge kugovaniswa kwese kwese kwese kungave kuri kudikanwa kuti vatengi veTSMC vabvise njodzi yezvematongerwo enyika.
Uyewo, Izvo zvakakosha kuti uzive kuti EU yakazvipira kuisa mari inosvika ku € 145 bhiriyoni kuvandudza anotevera-chizvarwa processors uye kugadzirisa iyo 2nm etching maitiro eva processor. Izvi zvinogona zvakare kushandiswa kubhadhara bvunzo uye mamiriro ekugadzirisa zvikamu muUnited.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Germany iri mukuona kweTSMC kutora fekitori yayo yekutanga muEurope
Ndinozviona zvakanaka kwazvo zvinoitwa neEuropean Union kuvhura kutengeserana
Uye pakati pekupokana, MUSE Boka rinotanga Audacity 3.0.3 uye inosanganisira AppImage vhezheni yeLinux
Yechitatu beta vhezheni yeHaiku R1 yakatoburitswa